Ifilimu le-China Bundling, ukugoqa okulusizo, ukugoqa isibambo sokusonga Umphakeli
Ithayela lokuvala uphawu
Ama-Bopp Tape Jumbo Rolls
Ngaphandle:21% - 30%
Incazelo:Ifilimu ehlanganayo,ukugoqa ngesandla,isibambo sokugoqa isibambo,ifilimu yokugoqa ngesandla,,
Ithayela lokuvala uphawu
Tape Emaceleni Omabili
Ifilimu Lomshini Wokwehlisa
Ifilimu Yesandla Eselula
Ifilimu leJumbo Stretch
Ishidi Lezimpahla Ezindiza
Indwangu Ye-Plastic Drop
Isikhwama Sokulahla Isihlahla SikaKhisimusi
 HomeImikhiqizoNweba ifilimuIfilimu Yokuqhuma
Ithayela lokuvala uphawu
Ifilimu Yokuqhuma (Total 50 Products)
Izigaba zomkhiqizo we- Ifilimu Yokuqhuma , singabakhiqizi abakhethekile abavela eChina, Ifilimu ehlanganayo , ukugoqa ngesandla abahlinzeki / ifakethe, imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ye- isibambo sokugoqa isibambo R & D kanye nokukhiqizwa, sinemisebenzi ephelele emva kokuthengisa nokusekela lobuchwepheshe. Bheka phambili ukubambisana kwakho!
Ifilimu Le-Baby Roll Mini Stretch
Ukugoqwa Kwesandla Esincane
Ukupakisha Okugoqiwe nge-Handle
Nweba Ifilimu Lokugoqa Impahla
Izandla ezisetshenziselwa ukugoqa ifilimu yokugoqa ifilimu
Ifilimu yokugoqa emnyama emnyama
18 x 1500 isibambo sokugoba ipallet
Ifilimu lokugoqa elisongekile
Izandla zokugoqa izandla
Ifilimu lokusonga eligoqiwe
Ukugoqa okugoqiwe kwe-Mini
Ifilimu eligoqiwe eligoqiwe le-PE
Ifilimu elihle le-Mini elula elula enesibambo
Isendlalelo sefilimu esindayo yesandla sefilimu yepulasitiki
Ukwenza Ngokwezifiso ifilimu eliseduze le-Handy Pe Stretch Wrap
Blue Handle elula ukugoqa eshukumayo
Ifilimu entsha yelula imodeli ngesibambo sombala
Inqwaba epulasitiki enemibala eshukumayo esongekile esongelwe
Faka umbala ifilimu ngesibambo
Umkhiqizo omusha i-Handle elula film hand bopha roll
Ifilimu Lokugoqwa Kwe-Mini Stretch
Amandla Wokunikezela: 400 tons/months
Ifilimu Le-Baby Roll Mini Stretch Ifilimu lethu le-Baby Roll Mini Stretch linezinhlobo ezimbili, enye inesibambo sayo kanti enye inesibambo esingashintshwa. Ngokuvamile, uma uletha isibambo sakho, kuzoba lula kakhulu ukusetshenziswa nsuku zonke,...
Ukugoqwa Kwesandla Esincane Ngemuva kokuthi amakhasimende amaningi athenge ukugoqwa kwesandla sethu iMini, bayabuza ukuthi umbala wesibambo ungenziwa ngezifiso yini. Impendulo inguyebo. Zonke izinto zethu zingenziwa ngezifiso. Umbala wesibambo nawo...
Ukupakisha Okugoqiwe nge-Handle Ukupakisha Okugoqiwe Ngesibambiso Ngemuva kokuthi amakhasimende amaningi athenge ukugoqwa kwethu kokupakisha ngeHandle, abuza ukuthi umbala wesibambo ungenziwa ngezifiso yini. Impendulo inguyebo. Zonke izinto zethu...
Nweba Ifilimu Lokugoqa Impahla Ukupakisha Ifilimu Yokunweba Ngemuva kokuthi amakhasimende amaningi athenge ifilimu lethu le-Stretch for Wrapping Luggage, abuza ukuthi umbala wesibambo ungenziwa ngezifiso yini. Impendulo inguyebo. Zonke izinto zethu...
Ukufakwa kwefasitela lokuphonsa kwepulasitiki le-PE I-Packaging Stretch Film isebenzisa inqubo yokwelula, ukusebenzisa umzamo obonakalayo futhi otholakala kwizimboni, kwezohwebo, ezifuyweni, ezolimo nokunye ukuvikela kokuphakheka nokutholakala...
Ikhwalithi enhle yokugoqa okuyisilinganiso se-mini Imidlalo yokusonga ifilimu egoqwa kahle: Ingasetshenziselwa ukuvikela ifenisha yendwangu kusuka emabalavini, emigqeni, emikhuni nasekungcoleni. Ngokubambelela okunamandla nokumelana namandla...
Imiqulu yokugoqwa kwekhwalithi enhle yekhwalithi enhle Izinzuzo ezigoqwayo zokusonga ifilimu ezisebenzisekayo: Ingasetshenziselwa ukuvikela ifenisha yendwangu kusuka kumabala, ukuklebhuka, ukuklwebheka, kanye nokungcola. Ngokubambelela okunamandla...
Ikhwalithi enhle yokugoqa okuyisilinganiso se-mini Imidlalo yokugoqa ifilimu eqonde ukugoqwa: Ingasetshenziselwa ukuvikela ifenisha yendwangu kusuka emabalavini, emigqeni, ekubukeni nasekungcoleni. Ngokubambelela okunamandla nokumelana namandla...
Ikhwalithi enhle yokugoqa okuyisilinganiso se-mini Imidlalo yokugoqa ifilimu eqonde ukugoqwa: Ingasetshenziselwa ukuvikela ifenisha yendwangu kusuka emabalavini, emigqeni, emikhuni nasekungcoleni. Ngokubambelela okunamandla nokumelana namandla...
Ikhwalithi enhle yokugoqa okuyisilinganiso se-mini Izinzuzo zokugoqwa kwemisiko engu-Mini: Ingasetshenziselwa ukuvikela ifenisha yendwangu kusuka emabalavini, emigqeni, emikhuni nasekungcoleni. Ngokubambelela okunamandla nokumelana namandla...
Ikhwalithi enhle yokugoqa okuyisilinganiso se-mini Izinzuzo zokugoqa ezincane ze-Mini: Ingasetshenziselwa ukuvikela ifenisha yendwangu kusuka emabalavini, emigqeni, emikhuni nasekungcoleni. Ngokubambelela okunamandla nokumelana namandla einyembezi,...
Faka umbala ifilimu ngesibambo Izinzuzo: (1) Zonke izinto zethu ezisetshenziswayo zingama-100% ama-LLDPE amsulwa. Ngakho-ke ikhwalithi yethu ingaqinisekiswa. (2) Ukonga izindleko nokusingatha isikhathi (3) Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nemishini (4)...
Ukwenza Ngokwezifiso ifilimu eliseduze le-Handy Pe Stretch Wrap Izinzuzo :: (1) Zonke izinto zethu ezisetshenziswayo zingama-100% ama-LLDPE amsulwa. Ngakho-ke ikhwalithi yethu ingaqinisekiswa. (2) Ukonga izindleko nokusingatha isikhathi (3)...
Blue Handle elula ukugoqa eshukumayo Izici: I-1, ukuqina okuqinile, ukucaca namandla anamandla amancane acwebezelayo 2, impahla yokunamathela okunecala elilodwa nokunamathela okuzinhlangothi ezimbili I-3, isisindo esikhanyayo, ubukhulu obukhulu I-4,...
Izinzuzo :: (1) Zonke izinto zethu ezisetshenziswayo zingama-100% ama-LLDPE amsulwa. Ngakho-ke ikhwalithi yethu ingaqinisekiswa. (2) Ukonga izindleko nokusingatha isikhathi (3) Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nemishini (4) Imibono emihle yokuvikela...
Inqwaba epulasitiki enemibala eshukumayo esongekile esongelwe Ifilimu eyinqwaba yezinqwaba ilusizo cishe kuyo yonke indawo ekhaya noma emsebenzini, ukugoqa okuyisisekelo seplastiki akuyona okunamathelayo njengokuthi noma imiphetho ebukhali...
Umkhiqizo omusha i-Handle elula film hand bopha roll Izinzuzo: (1) Zonke izinto zethu ezisetshenziswayo zingama-100% ama-LLDPE amsulwa. Ngakho-ke ikhwalithi yethu ingaqinisekiswa. (2) Ukonga izindleko nokusingatha isikhathi (3) Ubuchwepheshe...
Ifilimu Lokugoqwa Kwe-Mini Stretch We izinto ezibalulekile ezivela Exxonmobile, metallocene iyanezelwa ukuze kuqinisekiswe ukwelulwa okuphezulu nokuqinisa ukumelana izinyembezi. Item Width Thickness Net Weight Elongation Pull force Resistance Hand...
I-China Ifilimu Yokuqhuma Abahlinzeki
I-Bundling Filamu yi-Baby roll Stretch Film, okuyifilimu efanelekayo uma ufuna ukunciphisa isilinganiso sohlelo lokusebenza noma isifiso esikhulu sangaphambi kokunweba. Le filimu ngukusebenza okuphezulu, ifilimu elenzelwe ngaphandle elenziwe kusuka kubuchwepheshe obuphezulu. Amandla athuthukisiwe nezimpawu zokwelulwa zisho ukusetshenziswa kwefilimu le-mini mum ngenkathi kunikelwa ngokubamba okuphezulu emithwalweni engadingi kangako.
Ifilimu le-grade grade elula
Ibhande lepulasitiki lepulasitiki lokupakisha ibhande
Isampula Samahhala Sula i-Bopp Tape Roll
Sula ifilimu lokugoqa leplastiki lokuhambisa
Umbala Wefilimu We-Hand & Machine Stretch
Ithayela Eliprintiwe le-BOPP Eliprintwe Nge-LOGO
Ikhwalithi ephezulu yokufaka uphawu kwekhwalithi ephezulu
Ibhendi yensimbi yepulasitiki yensimbi
I-polypropylene epakisha imigoqo epulasitiki
I-PE Hand Pallet Wrap Roll
Ibhande le-pet poly lepulasitiki lokubhinca ibhande
Ifilimu ehlanganayo ukugoqa ngesandla isibambo sokugoqa isibambo ifilimu yokugoqa ngesandla Ifilimu elisindayo
IzitifiketiI-Company ShowIvidiyo360° Virtual Tour
Umakhala ekhukhwini: +8618025199553
Ikheli: No.230 Liuhuaxi Street, Xiakou, Dong Cheng, Dongguan, Guangdong
Copyright © 2021 Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. Wonke amalungelo agodliwe.